Ka m na-ede ihe ntanetị, ọ nwere mgbe ụfọdụ enwere ụdị njikọ Indiana. Plone adịghị iche. Calvin Hendryx-Parker bụ onye otu ọgbakọ Plone ntọala ma ọ dị ebe a na Fortville, Indiana. Nwunye Calvin, Gabrielle Hendryx-Parker guzobere ụlọ ọrụ ahụ, ụkwụ isii, na 1999 na San Francisco na ha kwagara ụlọ ọrụ na-ahụ maka mba ụwa na Indiana. Gabrielle nwekwara MBA na Marketing na Leadership na EM Lyon, France.
Fekwụ isii ugbu a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 20 ma na-aga n'ihu na ndekọ ndekọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ kwa afọ kemgbe ịmalite. Ọ bụ ụtụ maka nka na nkwado ha na-enye ndị ahịa ha. Isii Upkwụ adminkwụ na-elekọta Plone Tune-Up Day… kwa ọnwa, ụbọchị niile, ihe omume mebere maka inyere obodo Plone aka.